Ch 10 Mark – 2kalluunka
Home / Kitaabka Quduuska ah / Injiilka Markos / Ch 10 Mark
10:1 Oo anigoo, ayuu halkaas ka tegey oo wuxuu galay aagga Yahuudiya oo Webi Urdun ka shisheeya. Oo haddana, dadkii badnaa ayaa isu yimid isaga ka horreeyey. Oo sidii uu ahaa caado inuu sameeyo, ayuu haddana wax baray.
10:2 Oo waxay soo socdo, Farrisiintii waxay weyddiiyeen, jirrabaya: "Ma xalaal baa in nin ka qaadista xaaskiisa?"
10:3 Laakiin in jawaab, Wuxuu iyaga ku yidhi, "Muuse muxuu idinku baro?"
10:4 Oo waxay ku yidhaahdeen, "Muuse wuxuu siiyey fasax in uu qoro warqaddii furniinta iyo in ay iyada ka qaadista."
10:5 Laakiin Ciise wuxuu ku yidhi jawaabay: "Waxa ay ahayd sabab u tahay qalbi engegnaantiinna aawadeed qalbigaaga in uu amarkaas in aad u.
10:6 Laakiin tan iyo bilowgii abuurniinta, Ilaah wuxuu sameeyey lab iyo dhaddig.
10:7 Taas darteed, Nin ka tegayaa aabbihiis iyo hooyadiis ka dambeeya, oo uu qabsan doonaan xaaskiisa.
10:8 Oo laba ahaan doonaan mid ka mid ah jidhka. Oo sidaas daraaddeed, ay hadda yihiin, aan laba, laakiin waa isku jidh.
10:9 Sidaa darteed, wixii Ilaah isku xidhay, ninna yaanu kala furin. "
10:10 Oo haddana, ee guriga, xertiisii ​​weyddiiyey oo ku saabsan wax la mid ah.
10:11 Oo isna wuxuu ku yidhi iyagii: "Ku alla kii meesha ka saaray xaaskiisa, oo mid kale guursadaa, ayaa ka sinaysta.
10:12 Oo haddii mid tahay naag nin leh oo beeniyay ninkeeda, oo waa mid kale guursato, ayay sinaysataa. "
10:13 Markaasay waxay u keeneen in carruurta yar, oo sidaas daraaddeed ayuu iyaga taaban. Laakiin xertii u digay kuwa iyaga ka soo bixiyey.
10:14 Laakiin Ciise goortuu arkay this, inuu dembi qaaday, oo wuxuu iyagii ku yidhi: "U ogolow kuwa yaryar inay ii yimaadaan, oo ha u mamnuucayaan. Waayo, kuwan oo kale ayaa ka mid ah boqortooyada Ilaah.
10:15 Runtii waxaan idinku leeyahay, ku alla kii aan aqbali doono boqortooyada Ilaah sida ilmo yar oo, ma geli doono. "
10:16 Oo waxaa iyaga la daayo, oo intuu calaacalihiisa saaray inuu, ayuu u duceeyey iyaga.
10:17 Oo markuu ka tegey jidka, mid gaar ah, kor u socda oo intay hortiisa jilba joogsadeen, waxay weyddiiyeen, "Macallin wanaagsanow, maxaan sameeyaa, si aan aamin nolosha weligeed ah?"
10:18 Laakiin Ciise wuxuu ku yidhi, "Maxaad iigu yeedhaysaa wanaagsanow? Mid wanaagsan ma jiro, marka laga reebo Ilaah ka mid ah.
10:19 Waxaad ogaan qaynuunno: "Waa inaanad sinaysan. Ha u dilina. Waa inaanad wax xadin. Ha hadli marag been ah. Ha ku khiyaanayn. Aabbahaa iyo hooyadaa maamuus. "
10:20 Laakiin in jawaab, wuxuu ku yidhi isagii, "Macallimow, oo intaas oo dhan waxaan ku arkay tan iyo yaraantaydii. "
10:21 Markaasaa Ciise, fiirinaya at, wuxuu isaga u jeclaaday, oo wuxuu ku yidhi isagii: "Mid ka mid ah wax ka dhiman in aad. Tag, iibi waxaad haysatid oo, iyo masaakiinta siinayaa, ka dibna waxa aad ku lahaan doontaa maal jannada ku. Oo kaalay, ha i soo raaco. "
10:22 Laakiin isagu wuxuu ka tegey murugaysan, la aad uga murugooday erayga. Waayo, isagu wuxuu ahaa mid waxyaalo badan.
10:23 Markaasaa Ciise, hareerahooda fiiriyeen, wuxuu xertiisii ​​ku yidhi, "Sidee waa ku adag tahay kuwa maalka isku galaan boqortooyada Ilaah!"
10:24 Xertiina waxaa ka yaabeen erayada uu. Laakiin Ciise, jawaabay mar, wuxuu iyagii ku yidhi: "Wiilasha Little, siday ugu adag tahay kuwa ku kalsoon tahay in lacag galo boqortooyada Ilaah!
10:25 Waxaa ka hawl yar in awr inay dhex maraan irbad daloolkeed ka duso ah, badan talagalay dadka hodanka ah si ay u galaan boqortooyada Ilaah. "
10:26 Wayna ka yaabeen xitaa ka sii badan, isku yidhaahdeen, "Yaa, ka dibna, badbaadi kara?"
10:27 Markaasaa Ciise, fiirinaya iyaga at, sheegay: "Dadka waa wax aan macquul aheyn; laakiin ma Ilaah la. Waayo, Eebana wax kasta waa u suurtoobaan. "
10:28 Markaasaa Butros bilaabay inuu ku yidhaahdo in, "Bal eeg, ayaannu ka tagnay wax walba waana ku raacnay. "
10:29 Iyada oo laga jawaabayo, Ciise wuxuu ku yidhi: "Runtii waxaan idinku leeyahay, Waxaa jira mid wax ayaa tagay guriga, ama walaalo, ama waxay Hanato Midigtoodu, ama aabbihiis, ama hooyo, ama carruurta, ama dhulka, aawaday iyo injiilka aawadii,,
10:30 oo aan haatan helayn boqol laab, haatan oo la joogo: guryaha, oo walaalo ah, wiilal iyo gabdhoba,, iyo hooyooyinka, iyo carruurta, iyo dhulka, la heli doonaa silec, iyo nolosha weligeed mustaqbalka weligeed ah.
10:31 Laakiin qaar badan oo hore oo kale waa dambayn doonaan,, iyo kuwa dambe u horrayn doonaan. "
10:32 Now they were on the way ascending to Jerusalem. And Jesus went ahead of them, and they were astonished. And those following him were afraid. Oo haddana, taking aside the twelve, he began to tell them what was about to happen to him.
10:33 "Waayo, bal eeg, we are going up to Jerusalem, and the Son of man will be handed over to the leaders of the priests, and to the scribes, and the elders. And they will condemn him to death, and they will hand him over to the Gentiles.
10:35 Iyo Yacquub, iyo Yooxanaa,, wiilashii Sebedi, dhowaaday isaga u, oo wuxuu ku yidhi, "Macallimow, waxaan jeclaan lahaa in wixii aannu weyddiisanno, waxaad samayn lahayd noo. "
10:36 Laakiin wuxuu iyagii ku yidhi, "Maxaad doonaysaan inaan idiin sameeyo?"
10:37 Oo waxay ku yidhaahdeen, "Na sii inaannu fadhiisanno, mid aad u leedahay oo kale ee aad bidix, xaggii ammaantaada. "
10:38 Laakiin Ciise wuxuu ku yidhi: "Ma garanayo in aad waxaad weyddiisanaysaan. Ma karaysaan inaad ka cabtaan ka Jimcaale laga waxaan cabbaa, ama in laydinku baabtiiso baabtiiska laygu ahay in lagu baabtiiso?"
10:39 Laakiin waxay ku yidhaahdeen, ". Karno" Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi iyagii: "Run ahaantii, waxaad cabbi doono Jimcaale ah, kaas oo aan ka cabbayo; iyo idinka waxaa laydinku baabtiisi doonaa baabtiiska, oo waxaan ahay in lagu baabtiiso.
10:40 Laakiin si ay u fadhiisataan anigu xaq u, ama aan ka tagay, Waa kuma lihi inaan idin siiyo in aad, laakiin waa kuwa loo diyaargareeyey. "
10:41 Tobankii, Marka tani maqalka, wuxuu bilaabay inuu u cadhoodeen xagga Yacquub iyo Yooxanaa.
10:42 Laakiin Ciise, iyaga oo wacaya, wuxuu iyagii ku yidhi: "Waxaad ogtahay in kuwa markaa u muuqda in ay madaxda aan Yuhuudda ahayn dhexdooda xukumaan, iyo hoggaamiyayaashooda oo ay xukun ku leeyihiin.
10:43 Laakiin ma aha in ay sidan oo idinka mid ah. Halkii, ruuxii noqon lahaa weyn midiidinkiinna waa inuu ahaado;
10:44 oo ku alla kii marka hore wuxuu noqon doonaa mid ah addoonkii oo dhan waa in aad.
10:45 Sidaas, aad, Wiilka Aadanahu uusan si ay doonayeen inay isaga u adeegaan, laakiin si uu lahaa Wasiirka iyo naftiisa siin lahaa sida furasho badan. "
10:46 Oo waxay u tageen Yerixoo. Oo intuu baahinaya ka diray Yerixoo oo isaga iyo xertiisii ​​iyo dad faro badan oo aad u fara badan la, Bartimayos, oo ina Timayos ahaa, nin indha la ', fadhiyey oo dawarsanayay jidka yiil.
10:47 Oo markuu maqlay inuu yahay Ciisihii reer Naasared, wuxuu bilaabay inuu aad u qayliyo oo yidhaahdo, "Ciise, Wiilka David, qaadan ii naxariiso. "
10:48 Oo qaar badan oo digay isaga ah inaad xasilloonaataan. Laakiin wuxuu ku qayliyey oo dhan ka badan, "Wiilka David, qaadan ii naxariiso. "
10:49 Markaasaa Ciise, taagan weli, isaga baray in loogu yeedho. Waxay u bixiyeen ninkii indhaha la'aa, isaga ku leh: "Nabad. Kac. , Waa kuu yeedhayaaye. "
10:50 Markaasay u leexdeen maradiisa, ayuu kor u soo kacday oo u tagtay.
10:51 Oo jawaab, Ciise wuxuu ku yidhi, "Maxaad doonaysaa, inaan kuu sameeyo waa in?"Markaasuu ninkii indhaha la'aa ku yidhi isagii, "Master, inaan wax arko. "
10:52 Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi isagii, "Tag, rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey. "Kolkiiba ayuu wax arkay, oo isna wuxuu isagii raacay jidka.